Online Bunner - Page 51 of 59 - Media and Entertainment
လူတစ်ယောက် ကံညံ့ချိန် ကြုံရမယ့် အချက် ၅ ချက်
July 15, 2019 Online Bunner 0
လူတစ်ယောက် ကံညံ့ချိန် ကြုံရမယ့် အချက် ၅ ချက် (၁). လူကြီးသူမရဲ့ ဆိုဆုံးမစကားတွေကို နားငြီးသလို ခံစားရလိမ့်မယ် (၂). မကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း အတုအယောင်တွေကို စိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းသင်းလာတတ်ပါတယ် (၃). မထင်မှတ်ထားတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီး တစ်ခု ကြုံလာပါလိမ့်မယ်။ (၄). အပျော်ဘက်လိုက်ပြီး မကောင်းမှုတွေ ဆက်တိုက် လုပ်မိလာပါလိမ့်မယ် […]
လူကြည့်များပြီး ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ MasterCher Myanmar ဒိုင်လူကြီးရဲ့ လုပ်ရပ် အားပေးထောက်ခံတဲ့သူရှိသလို သဘောမတူတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ် ဒိုင်တွေရဲ့ ဝေဖန်သံတွေကလည်း မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မဖြစ်သင့်ဘူး ရိုင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေလည်း များစွာရှိပါတယ်.။ ထွန်းကျော်ဦးဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဟင်းပွဲပုံစံကို စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားတဲ့အခါ သူကိုယ်တိုင်ဝယ်စားချင်နိုင်မလား ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ခံရသလို…. အမှိုက်ပုံထဲကိုလည်း သွန်ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေ ဝေဖန်မှုများ […]
သင့်ချစ်သူရဲ့နှုတ်က ဒီစကား (၅)ခွန်းထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ……
လူတော်တော်များများက အပြောထက်အလုပ်က အဓိကကျတယ်လို့ ခံယူကြပေမယ့် အပြောကနေတစ်ဆင့် လုပ်လာမယ့်အရာတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်း၊ အမူအကျင့်၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို သူပြောတဲ့စကားတွေကနေတစ်ဆင့် သိလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်ချစ်သူဆီက ဒီစကား (၅)ခွန်း ဒါမှမဟုတ် ဒီအထဲက တစ်ခွန်းကိုပဲကြားဖူးတယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့။ ဘယ်လိုမှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ (၁) အပိုတွေလုပ်ပြန်ပြီ ယောက်ျားတစ်ယောက်၊ ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို […]
“လာမယ့်နှစ် အကယ်ဒမီဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တော့မယ့် လွင်မိုး” ….. ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီပေးပွဲအပြီးမှာတော့ လွင်မိုးက အကဲဖြတ် ဘုတ်အဖွဲ့ကို တော်တော်လေး မကျေနပ်ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေထဲက တစ်ယောက်လို့ ထင်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း မီဒီယာတွေက ပေါက်ချင်တဲ့ အတွက် သူ့ကိုပဲမေးချင်တယ် သူရဲ့ ရင်ထဲက စကားတွေကို […]
တနင်္ဂနွေသမီးများ…1.7.2019 31.7.2019 အထိ တနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း …… ဒီကာလမှာ မိမိအတွက် လုပ်စရာအလုပ်အကြွေးတွေများနေတတ်ပါတယ်။အရင်အပတ်က မပြီးပြတ်သေး တဲ့ကိစ္စတွေဒီကာလမှာ အပြီးသတ်လုပ်နေရတတ်ပါတယ်။ ဖခင်ရှိသေးသူများ ဖခင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီကာလမှာ အိုးအိမ်အပြောင်းအလဲမျိုးတွေ ၊ အိမ်ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေလဲကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ အားကိုးမရှာပါနဲ့၊ မိမိကိုယ်သာအားကိုးပါ။ လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကို သူများကိုမတိုင်ပင်ပါနဲ့ ၊အဖျက်စကားတွေပဲကြားရပါလိမ့်မယ်။ ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီး […]
သမီးလေး ကိစ္စမှာ အမှန်တရားအတိုင်း ဖြစ်မှ နစ်နာသူတွေ ပြန်လည်ကုစားလို့ ရပါမယ်။အခု အားလုံးလည်း သိနေပြီမို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါ့မယ်။အများပြည်သူက ထင်နေကြတဲ့ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် သားနှစ်ယောက်သည် အောင်ကြီးကို ထောင်ချလိုက်ရုံနဲ့ သူတို့ ဘ၀ ပြန်လည် ကုစားလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင်ကြီးသည် တရားခံ အစစ် […]
ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် မြန်​မာလူမျိုးတို့ရဲ့ သဒ္ဒါတရားကို အသုံးချ​နေတဲ့ လူလိမ်​ အလှူခံများ ….. ဒီနေ့ အိမ်ကိုအလှူခံလာသည်…၂၅ ၃၀ ဝန်းကျင်ယောက်ျားလေး ၃ ယောက်ဖြစ်၏… ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖို့အလှူခံတာလဲမေးတော့ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်ဖို့တဲ့လက်ထဲကိုစာရွက်တွေထိုးထည့်ပေးလာ၍ကြည့်လိုက်တောအလှူရှင်စာရင်းစာရွက်နှင့်အလှူခံခွင့်ပြုကြောင်းရပ်ကွက်ထောက်ခံစာကိုအုပ်ကြီး လက်မှတ်ထိုးထားသောမိတ္တူစာရွက်တွေဖြစ်နေသည်… အလှူရှင်စာရင်းမှာတော့နာမည်တွေနှင့်ဘယ်သူက သံဃာဘယ်နှစ်ပါးဆိုတာကို ရေးထား၏… ဆွမ်းကဘယ်မှာကပ်မှာလဲမေးရာကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ရုံးမှာဟုဖြေသဖြင့်…အိမ်နှင် ၅ အိမ်ခန့်သာခြားသောရပ်ကွက်ရုံးဘက်ကိုလက်ဖြင့်ညွှန်ပြကာ…ဒီရပ်ကွက်ရုံးမှာလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်… အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာနဲ့လက်မှတ်ပါပါတယ်ဟုပြောကာ လက်ထဲကမိတ္တူစာရွက်ကိုညွှန်ပြ၏… မူရင်းမပါဘူးလား […]
အွန်လိုင်းမှာ စွဲလမ်းရတဲ့ချစ်သူကို ခရီးအဝေးကြီးကနေလာပြီး ကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရမှ အသည်းကွဲသွားရတဲ့ ကောင်လေးရဲ့အဖြစ်…
ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ လူမှုကွန်ယက် အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုဟာ ကမ္ဘာတလွှားက လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း သုံးစွဲကြပြီး မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တိုးကာ ဘဝအတွက် အထောက်အကူတွေရပြီး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေချောမွေ့သူတွေ ရှိလာကြသလို. . . အွန်လိုင်းသုံးပြီး လူမှုကွန်ယက်မျိုးစုံက အသိပညာ ဗဟုသုတ သတင်း […]
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့နော်…
လူနာကြည့် မလာပါနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ ဆေးရုံမှာ လူနာကြည့်သွားတဲ့အခါ သိထားစရာအချက်များ နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပမ်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်ရမယ့်နေရက်တွေ၊အချိန်တွေ ရောက်လာတဲ့အခါ ကျေးဇူးပြုပြီး လူနာကြည့်၊လူနာအားပေး မလာပါနဲ့တော့ (၁)-စကားပြောဖို့ကိုပင် မနည်းအားယူနေရမယ့်အချိန်မှာ နေကောင်းလား၊သက်သာလားဆိုတဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေ မဖြေချင်တော့ပါ။ (၂)-ရေမွှေးဆွတ်ပြီး ငါ့အနား လာမရပ်ပါနဲ့ (အမွှေးနံ့၊ချွေးနံ့၊ဟင်းနံ့တွေကိုတောင် မခံနိူင်တော့တာကို သတိပြုမိပါစေ) (၃)-ဝတ္တရားအရ […]